Date My Pet » 6 Zvikonzero adzikamise Your Cell Phone
kubudikidza Erica Kutenderera kwacho kwakapiwa
6 Zvikonzero adzikamise Your Cell Phone
Uri agere mhiri kubva musikana kana mukomana hope dzako panguva candlelit mabiko panguva hippest panzvimbo itsva mutaundi. Zvose anokungurutsa muimwe nzvimbo royally kudanana nzira kusvikira foni yako inotanga kuvhuvhuta pamwe mumagwaro shamwari dzako, hanzvadzi uye kunyange amai - zvose kukumbira sei kuenda kana iri ndiro "mumwe." Une sarudzo mbiri: Munyaradze Ringer, akaisa foni kure uye hanya naro kusvikira musi wako pamusoro kana unogona kupindura mumwe nomumwe shoko kuuya munyika. Kana ukasarudza kwakazoitwa uri vachimhanya ngozi kwete chete vanoparadza zuva, asiwo zvinobvira zvinogona ramangwana dzorudo iri ikozvino-kugumbuka munhu.
Nei uchifanira kuisa yako foni pasi panguva imwe zuva, uye sei kuita kudaro kukwira mikana yokuti ubudirire ramangwana? Tora Kutarira zvikonzero nhanhatu nei kudanana pfungwa iri ukama Ender uye zvaungaita kuti mufunge Tech yakazara rudo upenyu kumativi.
Uri kumuita sokuti iye zvachose sakosha. Kutoti pane chokunyevera zvaipa kudaro senhengo yemhuri pedyo chave kuendeswa kuchipatara kana Bhasi yako kutyisidzira moto imi kana musingadi kudzokera na vake, pane chikonzero shoma kuti mafambire mufunge kubva musi yako foni yako. Pane nokudhiraivha panguva chidzitiro pachinzvimbo chako musi nokuda manheru rose, isa foni yako kure uye kumupa dzako nyatsoteerera.
Iye anogona kufunga kwete unongoda mariri. Fungidzira kuti uri kufambidzana nomumwe munhu here aisazombofa nani kutaura zvakare kuti. Waizoitei? Kana mhinduro yako rikawira imwe nzvimbo pedyo "kumubhadhara havana kuteerera" muchikwata - ndizvozvo chaizvo zvauri kuita kana uri kuvhiringidzika zuva. Kunyange zvazvo uri chaizvoizvo mameseji chipande nepaunogona kuti musi wako ber-zvinoshamisa, iye anogona kutora zviito zvenyu sechiratidzo chokuti une razero kumufarira.
Iwe tarisa zvakaipa. Chii mai vako vanoti pamusoro wako murombo tsika? Setisina uri pane imwe mhuri chisvusvuro, uye funga pamusoro zvakakodzera tafura nokuzvibata. Kunyange kana usina chaizvo Miss Tsika 100 muzana nguva, uyu ndiye munhu-do kuti mutevere.
Kukurukura ari maviri-nzira mumugwagwa. Okutanga misi shoma zvinopa nguva apo iwe uye zvaunokwanisa itsva mudiwa vari Kungosvika kuziva mumwe. Kuramba Anodongorera panguva sero yako, Achipindura na kana mameseji shamwari dzako anoisa chikuru nerodhibhuroku kana totaura mhenyu kukurukurirana zvinofanira kuitika pamberi penyu. Zvibvunze kana kutaurira BFF wako kuti musi wako "saka akanaka" nokuti Anoitira beagle ake akafanana zviri mwana wake ari nani pane chaizvoizvo kutaura naye nezvorudo wake dzinovaraidza.
Muri kuita kwete-saka-zvakanaka kuororwa. The kufambidzana dziva rinosvika kure, uye pane nguva dzose imwe hove kutora nzvimbo yako. Kuita murombo pfungwa yokutanga musi kungangova noruvara pfungwa zvaunokwanisa mudiwa pane ani ndimi uye kana iye achaenda nemi zvakare. Ko iye kuzotaura "hungu" kuti zuva rechipiri pashure pokuona yaunopedza 30 kubuda kwenyu 45 maminitsi chisvusvuro mameseji? Hazvina kunge.
Connections dzinoitwa nevanhu, uye kwete rwokugadzira. Kunyange ungave wakasangana paIndaneti uye kutanga "akataura" Via chinyorwa, kuti wechokwadi rudo kubatana unofanira chaidzo yevanhu-to-dzevanhu kudyidzana. Ainhonga foni yako anopawo zuva rako ushe vakasununguka kuita zvakafanana. Kutaura nevamwe vanhu panguva musi wako utadze kubva kuita rine chokuita mumwe.